काठमाडौं । बिरामीका लागि चिकित्सक भगवान हुन्। तिनै भगवान (चिकित्सक) ले नै बिरामीलाई मृत्युको मुखबाट फर्काएर नयाँ जीवन दिन्छन्, दिएका पनि छन्।
तर कहिलेकाहीँ तिनै भगवान (चिकित्सक) को एउटा सानो कमजोरी र लापरबाहीका कारण सामान्य बिरामीको पनि ज्यान जान्छ। यस्तै, चिकित्सक र ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको लापरबाहीका कारण काठमाडौंको गोल्फुटारका दोर्जे तामाङले १८ दिनमै छोरी गुमाउनु परेको छ।
अस्पतालका चिकित्सकको लापरबाहीका कारण १८ दिने शिशुको मृत्यु भएपछि पीडित आफन्तहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन्। जुम्ल्याहा मध्येकी एक छोरीको मृत्यु भएपछि परिवार शोकमा छ।
१७ वर्षदेखि मकाउ बस्दै आएका गोल्फुटारका दोर्जे श्रीमती निशा सुत्केरी हुने समय नजिकिएपछि बिदामा नेपाल फर्किए। चिकित्सकले दिएको सुत्केरी हुने डेट आएपछि दोर्जेले नेपालको सबैभन्दा महँगो ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा भर्ना श्रीमतीलाई भर्ना गरेका थिए।
घरमा नयाँ सन्तानको आगामन हुने भएपछि घरका सबै परिवारमा खुशी छाएको थियो। असार २० गते ग्राण्डी अस्पताललमै निशाले जुम्ल्याहा सन्तानको जन्म दिइन्। दुवै सन्तान छोरी थिए।
जुम्ल्याहा छोरीको आगमनसँगथै दोर्जे दम्पती र परिवारमा खुशी छायो। तर, अफसोच उनीहरुको त्यो खुशी धेरै समय टिक्न सकेन। जन्मेको २४ घण्टामा जुम्ल्याहा बच्चालाई 'अब्जरभेसन'का लागि भन्दै चिकित्सकले एनआइसियुमा लगेर राखे।
दुवै शिशुको जन्मिदा बित्तिकैको तौल २ किलो ६० ग्राम र २ किलो ११० ग्राम थियो। चिकित्सकले जुम्ल्याहा शिशुको स्वास्थ्य राम्रो भएको रिपोर्ट दिएको थियो।
तर, पछि कहिले दूध पचेन, कहिले रगतको रिपोर्ट मिलेको छैन भन्दै १८ दिनसम्म अस्पतालले भेन्टिलेटरमा राख्यो। भेन्टिलेटरमा राखेको १८ औं दिनमा एउटा बच्चा मृत्यु भयो।
मृतक बच्चाको हातमा पुरै घाउ देखिएपछि दोर्जे दम्पतिले चिकित्सकलाई सोधे–स्वस्थ्य बच्चाको हातमा घाउ कसरी आयो?
चिकित्सकले उत्तर दिए– इन्फेक्सनका कारण।
दोर्जेले जुम्ल्याहा छोरीहरुलाई अन्य अस्पतालमा लैजाने प्रस्ताव पनि गरेका थिए। तर, अस्पतालले अनुमति दिएनन्। स्वास्थ्य अवस्था सुधार भइरहेको छ भन्दाभन्दै अस्पतालका चिकित्सकको लापरबाहीका कारण एउटी छोरी गुमाउनु परेको दोर्जेले बताए।
दोर्जे र उनकी श्रीमती निशा।
एउटा छोरी गुमाएसकेपछि भने दोर्जेले अर्की छोरीलाई ग्राण्डीबाट निकालेर इशान बाल अस्पताल उपचारका लागि पुर्‍याए। इशान अस्पतालमा चिकित्सकलाई देखाउने वित्तिकै चिकित्सकहरुले दोर्जेलाई उपचारमा ढिलाइ गरेको भन्दै गाली गरे।
‘ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालबाट १८ दिनपछि इशान अस्पताल लगेपछि चिकित्सकहरुले उपचारमा किन ढिलाइ गरेको भनेर हामीलाई गाली गर्नुभयो,’उनले भने,‘यतिसम्म ग्राण्डी अस्पतालले बच्चाको उपचारमा लापरबाही गर्ने रहेछ। कसरी विश्वास गर्ने?
‘मैले त स्वस्थ छोरीलाई गुमाउनु पर्‍यो। म जस्तै पीडा अरु कसैले भोग्न नपरोस्,’ उनी भन्छन्। जानाजान पैसाका लागि स्वस्थ बच्चालाई एनआइसियुमा राखेर मार्ने काम ग्राण्डी अस्पतालले गरेको उनको आरोप छ।
दोर्जेले दुई छोरीको उपचारमै ग्राण्डी अस्पतालमा ६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चिएका छन्।
‘दुईमध्ये एक छोरी त गुमाए। अर्की छोरीको स्वास्थ्यमा पनि सुधार आइसकेको छैन,’उनले भने,‘मैले अझै कति सहनु पर्ने?’
एउटी छोरीको मृत्यु ग्राण्डी अस्पतालका चिकित्सककै लापरबाहीका कारण भएकाले अस्पतालले जिम्मा लिनु पर्ने तामाङले बताए। उनले अस्पतालले गल्ती स्वीकारेर माफी नमानेसम्म छोरीको शव नबुझ्ने पनि बताए।
चिकित्सकले गल्ती स्वीकार गरेपछि न्यायका लागि मेडिकल काउन्सिल र अदालतको ढोकासम्म पुग्ने उनी बताउँछन्।